पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ आश्विन १३ गते (सन् २०२१ सेप्टेम्बर २९ तारिख) बुधबार – Rastriya Yuvajagaran Nepali News
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ आश्विन १३ गते (सन् २०२१ सेप्टेम्बर २९ तारिख) बुधबार
मा प्रकाशित | धर्म/संस्कृति, राशिफल, हाइलाइट्स
पुर्पुरोमा जे लेखिए पनि भाग्यसँगै कर्म गरौं । कोरोना विरुद्धको खोप सबैतिर अभियानको रुपमा चलिरहेको हुँदा खोप लगाउने स्थानमा भिडभाड नगरी सबैले खोप लगाऔं । यतिखेर सबै भुगोल र समुदायमा कोरोनाको प्रभाव न्युन हुँदै गए पनि असर अझै बाँकी छ । भाइरल ज्वरोको प्रकोप पनि त्यतिकै बढेको छ । कोरोना र भाइरल ज्वरो छुट्याउन तुरुन्तै चिकित्सकको सल्लाह लिऔं । तरपनि कोरोनाको प्रभावबाट बच्न र बचाउन पर्ने दायित्व हाम्रै हो । यसर्थ कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायहरु स्वास्थ्य मापदण्ड, सामाजिक दुरीका साथ सचेत भई आफू सुरक्षित रहौं र अरुलाई पनि सचेत बनाऔं ।
मेष – बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्ला । आशा उत्साह थपिनेछ । ऐश्वर्य र आरोग्यता बढ्नेछ । साहसिक कार्य बन्ला । बौद्धिक र रचनात्मक क्षेत्रसित सम्बन्धित कार्यमा पनि सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ । आयमूलक काममा सफलता मिल्नेछ । इष्टमित्रको साथ मिल्नेछ । सुविधा बढ्ला । हरेक प्रकारले पराक्रम बढ्नेछ ।
बृष – उन्नति हुनेछ । मान महत्व बढ्ला । शुभ र बौद्धिक काममा सफलता मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । यात्रा होला । यश वर्चश्व वृद्धि होला । शुभकाममा प्रवृत्ति बढ्ला । तर अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुनेछैन ।
मिथुन – समय शुभ छ । खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ, धन सम्पत्ति बढ्नेछ । रसरागमा आकर्षण वृद्धि होला । धैर्य र विवेकले काम गर्नु बेस रहनेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ ।
कर्क – नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि खर्च तथा व्यस्तता बढ्नेछ । विलासमा रुचि बढ्ला । खेलकुदमा आकर्षण बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । योजना र बजेट बनाइ काम गर्नु हितकर रहला ।
सिंह – ग्रहगोचर लाभदायक र उन्नतिकारक रहला । मिठो भोजन खान पाउनु हुनेछ । सुख आरोग्यता र सौभाग्य बढ्ला । उधारो लगानी लगाइएको धन उठ्ला । रोकिएको काम बन्नेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । घरपरिवारसित सम्बन्धित शुभ समाचार मिल्नेछ । विजयश्री प्राप्त होला ।
कन्या – आर्थिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । रोकिएको काम बन्नुसँगै रोकिएको धन उठ्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । प्रेमपात्रसित भेटघाट होला । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । चलिरहेको र साहसिकता आदिसित सम्बन्धित कार्यमा सफलता मिल्नेछ । सुख समृद्धि बढ्ला । कला, साहित्य, गीतसंगीत आदि कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ ।
तुला – दौडधुप रहला, तर मन आनन्दित रहनेछ । कार्यमा सफलता भैरहनेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त होला । सन्तानको साथ मिल्नेछ । भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । तथापि अरुको भरमा नबसी आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु उचित होला । साझेदारीको काम बन्नेछ । शुभ काममा आकर्षण बढ्ला ।
वृश्चिक – मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । यात्रापरक कार्य बन्ला, तर अरुमाथि भर पर्नु उचित हुनेछैन । जोखिममा नपर्नुहोला ।
धनु – साहसिक काम बन्नेछ । आशा उत्साह बढ्ला । लेखन प्रकाशन, कला, साहित्य, लेखन आदिसित सम्बन्धित कार्यमा सफल हुनुहुनेछ । भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । ऐश्वर्य वृद्धि होला । भाग्यवर्द्धक र मानवृद्धिदायक काम बन्नेछ । पराक्रम वृद्धि होला । आयातनिर्यातसित सम्बन्धित काम बन्ला । सुख आनन्द मिल्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्ला । पारिवारिक स्थितिमा सुधार हुनेछ । भोजभतेरमा भाग लिनुहुनेछ ।
मकर – भाग्य वृद्धि होला । आरोग्यता बढ्ला । शत्रुलाई जित्ने क्षमता बढ्नेछ । सुखशान्ति मिल्नेछ । हांसविलासमा रुचि बढ्ला । मनोकूलको काम बन्नेछ । सभासमारोहमा मान पुरस्कार मिल्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला ।
कुम्भ – खेलकूद भ्रमण कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । भोगविलासप्रति रुचि बढ्ला । प्रेममा सफलता मिल्नेछ । सन्ततिसुख बढ्नेछ । मित्रमिलन हुनेछ ।
मीन – खेलकुद भ्रमणमा रुचि बढ्ला । वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ । रसरागमा रुचि रहला । धन सम्पत्ति बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्ला । सुख शान्ति बढ्नेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । राजकाज बन्नेछ ।
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ आश्विन १७ गते (सन् २०२१ अक्टुबर ३ तारिख) आइतबार
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ आश्विन १६ गते (सन् २०२१ अक्टोवर ०२ तारिख) शनिबार
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ आश्विन १५ गते (सन् २०२१ अक्टोवर ०१ तारिख) शुक्रबार
पवित्र पर्व जितियाका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाको शुभकामना